Soo dejisan Malwarebytes Anti-Malware 2.2.1.1043 – Vessoft
Soo dejisan Malwarebytes Anti-Malware
Malwarebytes Anti-Agab – software ah in la ogaado oo baabbi’in modules spyware kala duwan. software The ilaaliya computer ka Gooryaanka, Trojans, fayrusyada file, spyware, iwm Malwarebytes Anti-Agab leeyahay shaqo ah scan deg deg ah si loo hubiyo goobaha muhiimka ah nidaamka iyo in meel la furin ee zone karantiil ah. software The u saamaxaaya in ay dar files gaar ah ama fayl in liiska, kaas oo la iska indho halka dhowr. Malwarebytes Anti-Agab leeyahay feature a in aan bilowno software ah, xitaa inta ay ku furid by furin ah.
Ogaanshaha iyo micnehoodu modules spyware ah
Hubinta oo ka mid ah goobaha muhiimka ah nidaamka
Feature in ay iska indha xogta halka dhowr
Comments on Malwarebytes Anti-Malware:
Malwarebytes Anti-Malware Software la xiriira:
English, Español, Deutsch, 中文... MKV Player 2.1.17